Tsindry ambony Pu sombin-javatra mandroatra dipoavatra milina hampandehaninareo ho any USA - Bobo Machine Co., Ltd.
Tsindry ambony Pu sombin-javatra mandroatra dipoavatra milina hampandehaninareo ho any USA
BDF-II pneumatic tsindry ambony Pu sombin-javatra fanafody milina no famolavolana ny asa-toerana, amin'ny mirefy araka ny marina, na fampifangaroana, mitsingevana sy portable rafitra sy ny fifandanjana ny vola lany sy ny fampisehoana. Ny sombin-javatra HP fanafody be mpampiasa milina no ho manda, tafo, vata fampangatsiahana, ary ny boaty, sodina insulation tanjona.
1-	Pneumatic maotera
Ny pneumatic maotera hanaraka ny tari-dalana farany-fiovana ho an'ny fitarihana ny asa roa sosona, dia milamina kokoa ny fampisehoana oharina amin'ny herinaratra iray, mety ho sarotra ny asa toe-toerana.
2-	High fametrahana mazava tsara arakaraka paompy
3-	Main milina fanafanana rafitra
Ny tena mandany misaraka milina aluminium heater, miaraka amin'ny fitaovana fanafanana mahery toeram ho tsara kokoa fahaiza fanafanana, Mety amin'ny hafanana ambany asa amin'ny ririnina. Rafitra fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny isa Display, amin'ny fandrefesana sy ny rafitra fiarovana be loatra ny hifehy hafanana marina.
4-	Hose fanafanana rafitra
Hose roa dia tezitra misaraka amin'ny fanafanana farany mifono ao anatin'ny teknolojia, dia tsara kokoa noho ny nentim-paharazana ny iray, mba hahazoana antoka ny fitaovana tsara indrindra dia manana mari-pana sy ny viscosity alohan'ny fampifangaroana sy tifitra.
Ny andian-dahatsoratra GZI dipoavatra basy no modely malaza indrindra amin'ny 10 taona barotra fankatoavana. Izay hatrany amin'ny ambany vola ho an'ny fampisehoana miovaova. Mihoatra ny 20,000 tapa-basy dipoavatra toy izany no nampiasaina be noho 36 firenena amin'ny tsara Feedback.
Ny mampifandray Hose dia ampiasaina mba hampifandray ny fanafanana Hose mba Mitifitra basy, izay vita amin'ny fingotra tsindry ambony Hose. Miaraka amin'ny connection Hose, ny vitan'ny basy dipoavatra dia ho mora kokoa ny hazavana sy .
Ny fanafanana Hose dia ampiasaina mba nafanaina ny manta Hose fitaovana nandritra ny tondra alohan'ny tifitra, izay tsy mitandrina ny tsara mba hahazoana mari-pana mandroatra tsara vokatry. Ny iray mametraka fanafanana Hose anisan'izany ny roa Hose ho Poly sy ISO, ary ny fanafanana tariby, fanaraha-maso anatiny tariby, hatolotra miaraka amin'ny milina toy ny fitsipika fanahafana. Ny fitsipika dia halavan'ny 15 metatra ny lavany, izay azo omena toy ny isan-ny fepetra takiana.
Ny sombin-javatra price doesn milina \_ 't hampitaovana ny ara-nofo ho an'ny fitoeran-tsoliky azo entina fampiharana. Toy izany koa ny paompy sakafo ilaina mba hitsentsitra ny fanazavana avy amin'ny amponga vy lehibe ho an'ny asa mitohy. Ireo rehetra ireo no paompy an-trano ho amin'ny fanaraha-maso ny kalitao mba hahazoana antoka ny ela marin-toerana ny asa.
Ny Testing Lab
Machine in faobe famokarana mba hamonjy ny vola lany dia ambany ny vidiny. Ary milina in tahiry ho an'ny haingana sambo.
Ny faritra manan-danja no vokarina amin'ny alalan'ny machining foibe ho an'ny fanaraha-maso ny kalitao tsara sy ara-potoana entana.
Teo aloha : Bobo môtô NITENY MANOLO milina Maniraha ho any Pakistan
Manaraka : Miolakolaka mitafo fanitso vy fantsona ho an'ny posttension sodina fanaovana ny UAE mitafo fanitso vy sodina milina, miolakolaka mitafo fanitso sodina milina, posttension sodina milina fanaovana
Bobo amin'ny teny Shinoa dia midika exuberant sy matanjaka. Amin'ny mitohy fandrosoana sy ny fampandrosoana ao anatin'ny roapolo taona, Bobo milina ankehitriny dia lasa mpanamboatra milina ny mpitarika sy ny vahaolana mpamatsy in HVAC sy Refrigeration orinasa.